အကူအညီတောင်း နေ လို့ သနားပြီး စားစရာလေးတွေသွားပေးလိုက်ချိန် မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကြုံတွေ့ လိုက်ရတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အကူအညီတောင်း နေ လို့ သနားပြီး စားစရာလေးတွေသွားပေးလိုက်ချိန် မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကြုံတွေ့ လိုက်ရတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အတူ လုယက်သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေ ၊လိမ်လည် ခံလိုက်ရတဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း မကြာခဏမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။ လိမ်လည်သူတွေက ပြည်သူတွေယုံကြည်အောင် အမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီး လိမ်လည်နေကြကာ လိမ်လည်ခံရသူတွေထဲ အနုပညာရှင်အချို့လည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံတစ်ယောက် ဟာလည်း လူလိမ်တစ်ယောက် ရဲ့လိမ်လည်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတာကြောင့် သူမလိုအဖြစ်မျိုးနောက်လူတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ပြည်သူတွေကို ဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်နေပြီး အရမ်းခက်ခဲနေလို့ပါ ၊အဆင်မပြေလို့ပါ၊စားစရာမရှိလို့ပါ ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်း​လာတာကြောင့် သူမက သနားပြီး စားစရာတွေနဲ့ပိုက်ဆံတွေကို deliveryက တစ်ဆင့်သွားပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးအချို့နဲ့ စားစရာတွေ သွားပို့ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ လုံးဝမထင်မှတ် ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ စားစရာမရှိလို့ပါ ဆိုပြီး အကူအညီတောင်းခံခဲ့သူကိုကြည့်လိုက်ရာမှာတော့ တကယ်ခက်ခဲနေတာမဟုတ်သလို နေမကောင်းဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘဲ ရွှေ၊ငွေတွေကိုပါ ဝတ်ဆင်ထားတာ မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
သူမကတော့ အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ် ထင်ပြီး ကြိုးစား ရှာဖွေထားတဲ့ ချွေးနည်းစာပိုက်ဆံလေးတွေကို ပေးလှူလိုက်ပေမယ့် လိမ်လည်တာခံလိုက်ရတာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” လူတွေက ကိုယ်ဖစ်တဲ့ ဒုက္ခသေးသေးလေးကိုမှ အကြီးကြီးပုံကြီးချဲ့ပြီး အခွင့်အရေး လိုချင်ကြတာ..ကိုယ့်ထပ် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေကို မရှက်ကြဘူးလား.. အားမနာဘူးလား. အလုပ်မလုပ်ပဲ သူများပိုက်ဆံကို စားရက်ကြတာလား. အံ့ဩပါ့ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ယခုလိုလိမ်လည်မှုတွေပေါ များနေတဲ့ ကာလမှာ သတိထားလှူဒါန်းကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Source: saung yoon san ‘s facebook acc
တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔အတူ လုယက္သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့သတင္းေတြ ၊လိမ္လည္ ခံလိုက္ရတဲ့ သတင္းေတြကိုလည္း မၾကာခဏျမင္ေတြ႕လာေနရပါတယ္။ လိမ္လည္သူေတြက ျပည္သူေတြယုံၾကည္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုၿပီး လိမ္လည္ေနၾကကာ လိမ္လည္ခံရသူေတြထဲ အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ၾကပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဆာင္းယြန္းစံတစ္ေယာက္ ဟာလည္း လူလိမ္တစ္ေယာက္ ရဲ႕လိမ္လည္ျခင္းကို ခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ သူမလိုအျဖစ္မ်ိဳးေနာက္လူေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ ျပည္သူေတြကို ဖြင့္ဟေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး အရမ္းခက္ခဲေနလို႔ပါ ၊အဆင္မေျပလို႔ပါ၊စားစရာမရွိလို႔ပါ ဆိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က အကူအညီေတာင္း​လာတာေၾကာင့္ သူမက သနားၿပီး စားစရာေတြနဲ႔ပိုက္ဆံေတြကို deliveryက တစ္ဆင့္သြားပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕နဲ႔ စားစရာေတြ သြားပို႔ေပးလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ လုံးဝမထင္မွတ္ ထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ႀကဳံေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ စားစရာမရွိလို႔ပါ ဆိုၿပီး အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သူကိုၾကည့္လိုက္ရာမွာေတာ့ တကယ္ခက္ခဲေနတာမဟုတ္သလို ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာလည္းမဟုတ္ဘဲ ေ႐ႊ၊ေငြေတြကိုပါ ဝတ္ဆင္ထားတာ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။
သူမကေတာ့ အမွန္တကယ္ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ ထင္ၿပီး ႀကိဳးစား ရွာေဖြထားတဲ့ ေခြၽးနည္းစာပိုက္ဆံေလးေတြကို ေပးလႉလိုက္ေပမယ့္ လိမ္လည္တာခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီေဒါသထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ” လူေတြက ကိုယ္ဖစ္တဲ့ ဒုကၡေသးေသးေလးကိုမွ အႀကီးႀကီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး အခြင့္အေရး လိုခ်င္ၾကတာ..ကိုယ့္ထပ္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့သူေတြကို မရွက္ၾကဘူးလား.. အားမနာဘူးလား. အလုပ္မလုပ္ပဲ သူမ်ားပိုက္ဆံကို စားရက္ၾကတာလား. အံ့ဩပါ့ ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ယခုလိုလိမ္လည္မႈေတြေပါ မ်ားေနတဲ့ ကာလမွာ သတိထားလႉဒါန္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။
Previous post လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ များကို ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို ရင်ဖွင့် ပြောပြလာတဲ့ ခြူးလေး
Next post အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပေါင်သား ပေါ်လွင်အောင် ပြသ လိုက် တဲ့ ယွန်းမီမီကျော်